भर्खरै भयो एनएमबि बैंकको एफपिओ सेयर बाँडफाँड : कसले कति पाए ? « Janaboli
भर्खरै भयो एनएमबि बैंकको एफपिओ सेयर बाँडफाँड : कसले कति पाए ?
काठमाडौं । एनएमबि बैंक लिमिटेडले निष्काशनन गरेको एक करोड १४ लाख १५ हजार १६३ कित्ता एफपिओ सोमबार बाँडफाँड भएको छ । बैंकको सेयर निष्काशन तथा विक्री प्रबन्धक नागरिक लगानी कोषले एनएमबि बैंक बबरमहलमा बाँडफाँड गरेको हो । एफपिओमा कूल ६९ हजार ६४६ आवेदन परेकोमा १० जनाले दोहोरो आवेदन गरेका कारण २० वटा आवेदन भने रद्ध भएको छ । ६९ हजार ६२६ वटा आवेदन योग्य भएका छन् । कूल आवेदकबाट एक करोड १४ लाख ८३ हजार २४० कित्ता सेयरका लागि माग भएको थियो । जसमध्ये २० वटा आवेदनबाट परेको ४ हजार ३३० कित्ताको आवेदन रद्ध भएको छ । योग्य आवेदन कित्ता एक करोड १४ लाख ७८ हजार ९१० रहेको छ । नागरिक लगानी कोषका अनुसार एफपिओमा एक लाख ५० हजार १५० कित्तासम्म आवेदन गर्ने सबै ६९ हजार ६२४ जनाले मागे बमोजिम सेयर प्राप्त गरेका छन् । उनीहरुलाई एक करोड १० लाख ४३ हजार ७१० कित्ता सेयर बाँडफाँड गरिएको हो ।
यसो गर्दा निष्काशित एफपिओ तीन लाख ७१ हजार ४५३ कित्ता बाँकी रहन्छ । एक लाख ५० हजार १५० कित्तादेखि अधिकतम कित्ता दुई लाख २५ हजार २०० कित्ता आवेदन गर्ने दुई आवेदकलाई एक लाख ५० हजार १५० कित्ता र थप ३५ हजार ५७६ कित्ता गरि कूल एक लाख ८५ हजार ७२६ कित्ता बाँडफाँड गरिएको छ । यसबाट पनि बाँकी रहेको १ कित्ता सेयर माथिको दुई जनामध्ये एक जनालाई थप एक कित्ता गोलाप्रथाबाट बाँडफाँड गरिएको हो । एनएमबि बैंकले जेठ ३० गतेदेखि असार २८ गतेसम्म एक सय रुपैयाँ अंकित मूल्यमा २३३ रुपैयाँ प्रिमियम थपेर प्रतिकित्ता ३३३ रुपैयाँमा एक करोड १४ लाख १५ हजार १६३ कित्ता एफपिओ बिक्री गर्न लागेको हो ।
एनएमबिको सेयर आइतबार दोस्रो बजारमा प्रतिकित्ता ३५८ रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । बैंकले संस्थापकको ५१ र सर्बसाधारणको ४९ प्रतिशत हिस्सेदारी कायम गर्न एफपिओ बिक्री गरेको हो । एफपिओबाट बैंकले २ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ प्रिमियम संकलन गरेको छ भने एक अर्ब १४ करोड १५ लाख रुपैयाँ चुक्ता पूँजी बढाएको छ । हाल बैंकको चुक्ता पूँजी ६ अर्ब ४६ करोड १७ लाख रुपैयाँ रहेको छ । एफपिओ जारी पश्चात बैंकको चुक्ता पूँजी ७ अर्ब ६० करोड ३२ लाख नाघ्नेछ । राष्ट्र बैंकले तोकेको न्यूनतम चुक्ता पूँजी कायम गर्न बैंकले एफपिओले समेत पाउने गरि १५ प्रतिशत बोनस प्रस्ताव गरेको छ ।र बोनस पश्चात बैंकको चुक्ता पूँजी आठ अर्ब ७४ करोड नाघ्नेछ ।
‘भारत जाँदाबाहेक भारतीय मुद्रा प्रयोग नगर्न नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन
काठमाडौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले भारतीय रुपैयाँ भारतमा बाहेक अन्य मुलुकमा लैजान वा अन्य मुलुकबाट
नेपालमा फेला पर्यो १ सय ६५ किलोको बोका ! [बोका हेर्नेहरुको लाइन]
अर्घाखाँची । सामान्यतया तपाईले बीस देखि पचास केजीसम्म्को खसीबोका देख्नु भएको हुन सक्छ । तर
सनराइज बैंकको अध्यक्षमा उद्योगी दुगड
काठमाडौ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा चिरञ्जीवी नेपालले सनराइज बैंकको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष मोतीलाल
यो बैंकमा घरमै बसेर खाता खोल्दा रु १०० पाइने
काठमाडौं । सिभिल बैंक लिमिटेडले आफ्ना ग्राहकहरुको सुविधालाई ध्यानमा राखि अनलाईन अकाउन्टको सुरुवात गरेको छ